Microsoft ga - ebuputa laptọọpụ ihe ruru $ 189 iji zoo Chromebooks | Akụkọ akụrụngwa
Microsoft weputara laptọọpụ ihe ruru $ 189 iji maa Chromebooks
Ụlọ Ignatius | | Laptọọpụ
Omeela afọ ole na ole kemgbe kọmputa na teknụzụ chọtara niche na usoro agụmakwụkwọ America. Ihe fọrọ nke nta kemgbe mmalite nke iPad mbụ, ọtụtụ bụ ebe agụmakwụkwọ ahụ hụrụ ngwaọrụ a ezigbo ngwá ọrụ iji nyere ụmụ akwụkwọ aka kwa ụbọchị. Mana ka oge na-aga, ọnụahịa ha malitere ịbawanye oke ma Google wepụtara laptọọpụ mbụ na ChromeOS, sistemụ arụmọrụ dị mfe, nke chọrọ atụmatụ dị mfe iji rụọ ọrụ yana ihe a niile dị ọnụ ala karịa iPad. Kemgbe ọtụtụ afọ, Chromebooks abụrụla ebe a na-ewu ewu na ụlọ akwụkwọ America, mana nke a nwere ike ịgbanwe obere oge.
Ugbu a ChromeOS bụ sistemu eji arụ ọrụ nke abụọ na United States, n'azụ Windows na n'ihu nke macOS. Microsoft chọrọ ị nweta isi ya na ngalaba ọrụ a na-enye ego site na ịmalite laptọọpụ maka $ 189, laptọọpụ nwere ọtụtụ atụmatụ iji zute mkpa ụmụ akwụkwọ na-eji Chromebooks ugbu a. Dị ka Microsoft si kwuo, ebe agụmakwụkwọ dị mkpa karịa ike, nchekwa na arụmọrụ, n'otu ọnụahịa dị ka Chromebooks, ike nke ngwaọrụ ndị a anaghị enweta.
N'ihi ya, ná mgbalị na-egbo mkpa, ụlọ ọrụ ahụ chọrọ iweta ohere nke teknụzụ kachasị ọhụrụ nye ọtụtụ ndị ọrụ dị ka o kwere mee, na-enye Windows 10 PC iji nyere ha aka ịmụ ma nweta ihe ndị ọzọ. Otu ndị nrụpụta na-agba nzọ na Chromebook (HP, Lenovo, Acer ...), ga-akụkwa n'ụdị kọmputa dị ọnụ ala maka ngalaba agụmakwụkwọ, kọmpụta ga-enwe ọnụahịa kachasị elu nke $ 189, agbanyeghị na anyị nwekwara ike ịchọta ndị ọzọ zuru ezu na ngwaọrụ maka a obere n'elu price.
Laptọọpụ ndị a ga-ejikwa 2 ma ọ bụ 4 GB nke RAM wee jikwaa ha Ndị nchekwa Celeron ga-ejikwa nchekwa na-agbasawanye site na iji kaadị microSD, ihuenyo 12 nke anụ ọhịa na ụdị ụfọdụ ga-arụkọ ọrụ na ngwa ngwa iji nwee ike idetu ihe ozugbo na ngwaọrụ ahụ ga-enwekwa ihuenyo na-agbanwe agbanwe ka keyboard wee ghara iwe iwe mgbe ejiri ya maka nke a.
Mana ụmụ okorobịa nọ na Microsoft na-emekwa atụmatụ malite ikpo okwu yiri nke Google nyere ugbu a na ngwaọrụ ya maka gburugburu agụmakwụkwọ, ikpo okwu na-enye gị ohere ịnwe oge niilento chịrị ụmụ akwụkwọ ahụ, na-elele ma na-eleru anya ọrụ, ule na ndị ọzọ nke ndị ọrụ nkuzi nwere ike inye ha ọrụ. Ihe ikpo okwu a na - akpọ Microsoft Intune for Education, ga - enye ndị nkuzi ohere ijikwa ọrụ na agụmakwụkwọ mgbe ha na - etinye ma ọ bụ jikwaa ngwa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Kọmputa » Laptọọpụ » Microsoft weputara laptọọpụ ihe ruru $ 189 iji maa Chromebooks
Google I / O 2017 nwere ụbọchị ọrụ
Netflix na-emelite ngwa gam akporo ya ma na-enye ohere ibudata ọdịnaya na microSD